Tag: varotra mailaka | Martech Zone
Tag: varotra mailaka
KosmoTime: Mamorona asa izay mitahiry fotoana amin'ny kalandrie
Alarobia, Novambra 18, 2020 Alarobia, Novambra 18, 2020 Douglas Karr
Amin'ny maha mpiara-miasa ao amin'ny masoivoho miasa miaraka amin'ny orinasam-pandraharahana, manjary manjavozavo ny androko ary mikorontana ny kalandrie ataoko - manomboka amin'ny varotra, hatrany amin'ny paikady, amin'ny fijoroana, amin'ny fiaraha-miombon'antoka ary amin'ny fivorian'ny mpiara-miombon'antoka tsy tapaka. Eo anelanelan'ny antso rehetra ireo dia mila ataoko tokoa ny asa nanolorako tena tamin'ny mpanjifa koa! Zavatra iray izay nataoko manokana taloha dia nanakana ny fotoana tsy ho amin'ny kalandrie mba hahazoana antoka fa
Tombontsoa 5 Ny varotra mailaka dia manana ny fizotran'ny marketing mahazatra
Alakamisy, May 18, 2017 Wednesday, May 24, 2017 Douglas Karr
Rehefa nitombo ny habeny sy ny sakany, nanjary nanana olana bebe kokoa izy ireo. Fikambanana lehibe iray no mety hamoaka ampahefa-telovolana miaraka amina mpandraharaha an-jatony manoratra andalana kaody an'arivony izay niasa tsara teo an-toerana, saingy niteraka aretin'andoha sy fifandonana tany ambanin'ny toky. Ireo fifandonana ireo dia nety ho nesorina ireo fisehoan-javatra, fanemorana ny famotsorana, ary fihaonana etsy sy eroa ny fibaikoana hanandrana sy hanala ireo barazy. Haingam-pandeha metodolojia nanolotra hafa
Matetika misy tendrony roa ao amin'ny indostrian'ny Martech, rahona feno rehetra, ary sehatra irery. Saingy ny sasany amin'ireo fandrosoana lehibe indrindra hitako dia ireo sehatra afaka mamela ny fomba fiasa mailaka mailaka ary mampihena ny filàna famindrana data na fampidirana lafo. Mirongatra avokoa ny fangatahana votoaty premium hananganana fahefana, hahazoana fahefana amin'ny motera fikarohana ary hampiroborobo ny fizarana amin'ny media sosialy. Mitombo ny fangatahana amin'ny mpivarotra raha ny loharano kosa fisaka na
Ny Dia Mivarotra amin'ny varotra
Alahady, Martsa 19, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Nandritra ny folo taona nanampiana ireo orinasa hampivelatra ny orinasan-tserasera, dia nohamafisinay ireo dingana hiantohana ny fahombiazana. Matetika kokoa noho izany dia hitantsika fa miady amin'ny marketing nomerika ny orinasa satria manandrana mitsambikina mivantana izy ireo fa tsy mandray ny dingana ilaina. Fanovana Digital Marketing dia mitovy amin'ny fanovana nomerika ny fanovana marketing. Ao amin'ny fanadihadiana data avy amin'ny PointSource - fanatanterahana fanovana nomerika - angona angona avy amin'ireo mpanapa-kevitra 300 amin'ny teboka Marketing, IT, ary Operations
Ny State of Agile Marketing amin'ny 2016
Zoma, Jolay 29, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Efa ho 2 taona lasa izay, Jascha Kaykas-Wolff dia nizara izay Agile Marketing ary ny antony tsy maintsy nanodinan'ny orinasa ny paikadin'izy ireo hampiasa ilay metodolojia. Na dia tsy misintona ny bokin'i Jascha aza hadinoina fa mamaky ilay lahatsoratra izay mandeha amin'ny marketing amin'ny mailaka. Hatraiza no nahatongavantsika? Ny Workfront dia namoaka ny valin'ny fanadihadihana Agile Marketing nataon'izy ireo tamin'ny alàlan'ny MarketingProfs, ary ireto misy hevi-dehibe vitsivitsy: 41% amin'ireo mpivarotra no mampiasa fomba Agile hitantanana asa 43% amin'ny